VIDEO: Barlamaanka Puntland oo markale muddo 3 beri ah la fasaxay iyo sababta.
January 30, 2021 Xuseen 2
Puntlandtimes (Garoowe)-Xildhibaanada golaha wakiilada ee Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey fasax kujirey ayaa maanta yeeshay kulan uu shir guddoominayey guddoomiyaha golaha Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil.
Barlamaanka waxaa maanta loo qaybiyey Hindise xeereedka codbixiyayaasha Puntland oo horay xukuumaddu u soo meel marisay looguna talagalay in lagu maamulo doorashooyinka golayaasha deegaanka, barlamaanka iyo madaxweynaha Puntland ayna soo diyaariyeen guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland.
Guddoomiyaha barlamaanka ayaa markii loo qaybiyey, waxa uu goobta kaga dhawaaqay in barlamaanku ay fasax geli doonaan muddo saddex cisho ah si ay u soo akhriyaan hindisahan cusub, iyadoona cod la gelin doono maalinimada Arbacada ah ee foodda nagu soo haysa.
BIL SADDEX gurigaagana waa kaa kaxaysaa guri kalena kuma gayso!
Abwaan ma aha shaqsi ku haboon in uu gudoomiye ka noqda golaha ka soo magacaabo ee Puntland,waa shaqdi ku fiican baa la yuri amaanta madaxda maamulka Puntland.
Waa tii Faroole uu la haa waa nin giitaar la ordaya.
Puntland maantay ma laha Baarlamaan shaqeeya,waayo waaxaa meesha Ka baxay la xisaabtinkii maamulka Deni oo musumaasuqa ku caanbaxay.
8 xildhibaan baa meesha si sharci dara ah Deni iyo kooxdiisa u eryeen.